Layma's World | This is my new, virtual world … I’m the QUEEN in my world … | Page 3
Posted on November 18, 2008 by layma
Filed under: Poem |	12 Comments »
Posted on November 4, 2008 by layma
ကွန်ပြူတာ … လေ… ။ ။
Filed under: Pieces |	15 Comments »
တွေ့ ဆုံ အကြွေးပေးခန်း
Posted on October 26, 2008 by layma
အိမ်ရှေ့မှာ Notice စာရောက်နေတယ်…။ တက်စ်ထားတယ် လမကုန်ခင်ရေးပေးပါ နော့် 😛 …. တဲ့ …။ ပြောင်ပြသွားလိုက်သေး… မခန့်တာပြောပါတယ်…။ ဘာအကြောင်းရေးရမှာလဲ… သွားကြည့်တော့ နောက်တီးနောက်တောက်နဲ့ဘာ Tag လည်းတော့ မသိပါ …. တဲ့ …။ လူကြီးကို နောက်ပြန်ပြီ …။ သူရေးထားတာ ဖတ်ကြည့်တော့ ကြယ်ပွင့်များနှင့်တွေ့ ဆုံခြင်းလိုလို ဆိုပါလား…။ အဟိ… ဂလို ဆိုတော့လည်း ရေးရပေမပေါ့ ….။ အောက်ဆုံးမှာတော့ “ အပျင်းထူနေတဲ့ အစ်မလေးမ ” ဆိုပါလား……။ ဘယ်လိုလုပ်သိသွားပါလိမ့်နော် …။ လမကုန်ခင် မြန်မြန် ရေးပေးမှ ဖြစ်မယ်…။ တော်ကြာ နာမ၀ိသေသန ဆိုးဆိုးတွေ အတပ်ခံနေရဦးမယ်…။
ငွေကြယ်ပွင့် လေးမ နှင့် ဂျာနယ်အလစ်သမား မောင်မျိုး တွေ့ ဆုံ အကြွေးပေးခန်း
မေး ……….လေးမ (တဂ်ခံရတဲ့သူ ) နဲ့ မောင်မျိုး (တဂ်တဲ့သူတို့) ဘယ်လိုများ ဆက်ဆံပတ်သက်လည်း မသိဘူးနော်
ဖြေ………..အင်တာနက် ရင်ပြင်ပေါ်မှာ ပြေးပြေးလွှားလွှား သွားသွားလာလာလုပ်ရင်း ခင်မင်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေပါ ။
မေး……….သူ့အပေါ် လေးမရဲ့ထင်မြင်ချက် ၅ ချက်လောက်ပြောပြပါလား ?
1 ရုပ်ရည်ကတော့…… ခပ်ပိန်ပိန် … ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ… နှုတ်ခမ်းမွှေးပါပါတယ်… မယုံရင် သူ့ ဘလော့ဂ်မှာ ကြည့်ပါ… ဓါတ်ပုံတင်ထားပါတယ် …။
2 ရေးတဲ့စာက …… အေးကြည်မ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ဘလော့ဂ်မှာ ဖန်တီးပြီး အင်မတန် အနိုင်ယူတတ်ပါတယ် …။ သူ့ အကြောင်း ကို ရိုးသား ပွင့်လင်းစွာ ရေးပြတတ်ပါတယ်…။
3 ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အချက်က …… သူ့ ရဲ့ အလွဲတွေ ဖြစ်ပါတယ်….။
4 မကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ တခါတရံ ဘလော့ဂ်ဂါ မိတ်ဆွေ တချို့ နဲ့စိတ်ကောက်တတ်ပါတယ်….။
5 နောက်ဆုံးထင်မြင်ချက်ကတော့ …. လူချစ်လူခင် အရမ်းများတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ ဖြစ်ပါတယ်…။
မေး….အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံး လေးမ အတွက် လုပ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အရာလေးများရှိလား ?
ဖြေ…..မနှစ်က ဇန်န၀ါရီလမှာ မေးလ်နဲ့လက်ဆောင် ပို့ လိုက်တာပါ…။
မေး……အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံး သူပြောခဲ့တဲ့ စကား ?
ဖြေ…. တီကြွက်ရေ့ …. ….
မေး………သူသာ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာလုပ်မလဲ ?
ဖြေ…. ဒီမေးခွန်း … ဆင်ဆာဖြတ်ပါတယ်…။ ဘလော့စပေါ့ ဘန်းခံရတာကိုသာ ကျော်ဝင်လို့ ရမယ်…။ ဒီမေးခွန်းကြောင့် ကောင်းကင်ကြီး လေးမကို အင်တာနက် သုံးခွင့်ဘန်းလိုက်ရင် ကျော်ဝင်လည်းမရတော့ပါ…။
မေး….. ချစ်သူသာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ဘက်က ဘာတွေ ပြုပြင်ဖို့လိုမယ်ထင်လဲ ?
မေး………သူက လေးမ ရန်သူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရော ?
ဖြေ……… သူ့ ဘလော့ဂ် မလည်ဘူးပေါ့…။( ဘလော့ဂ် မလည်တိုင်းတော့ ရန်သူ မဟုတ်ဘူးနော်. အတွေး မမှားနဲ့နော်)
ဖြေ…. ရန်စလာရင် ရန်သူဖြစ်သွားမယ် …။
မေး…. သူ့အတွက် လေးမ ဆန္ဒအရှိဆုံး လုပ်ပေးချင်တာလေးများရှိလား ?
ဖြေ…. လောလောဆယ် သူရေးခိုင်းတာ ရေးပေးတယ်…။
မေး….. သူ့အပေါ်ခြုံငုံပြီး သုံးသပ်ကြည့်ရင် ဘယ်လိုမြင်လဲ ?
ဖြေ…. လူရ်ိုးလေးပါ… ။ ဟီး…( ထင်ရတာပဲ.. သမင်သားမစားဘူးလို့ …. ပြောတာပဲ) ။ ညီမလေးတွေ စိတ်ကူးမလွဲကြနဲ့နော်….။
မေး….. ( တကယ်ကို ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ ) လေးမအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုရော ဘယ်လိုမြင်လဲ ?
ဖြေ….အကောင်းပြောရင် ကျေနပ်စရာလို့မြင်ပြီး … မကောင်းပြောရင် ရယ်စရာလို့မြင်ပါတယ်…။
မေး… ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်မိတဲ့ လေးမ ရဲ့ characteristic လေးပြောပြပါလား ?
ဖြေ… လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေး တဲ့ အကျင့် …။
မေး…. ဒါဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမုန်းဆုံး characteristic လေးကရော ?
ဖြေ…..လွတ်လွတ်လပ်လပ် မရေးရဲတဲ့ အကျင့် ….။
မေး….ကိုယ်အဖြစ်ချင်ဆုံး လူစားမျိုးက ဘယ်လိုလဲ?
ဖြေ….စိတ်ရော လူရော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှိတဲ့ လူစားမျိုး ။
မေးးး … ချစ်ခင်ဂရုစိုက်တဲ့လူတွေကို ဘာများပြောချင်ပါလဲ ?
ဖြေ… နှလုံးသားအာဟာရ ဒါနပြုကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ…။
မောင်မျိုးရေ… သတိတရ ရေးခိုင်းတာလေးကို ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးပြီးပြီမို့ဆက်ပျင်း.. ဆက်ပျောက် … လိုက်ဦးမယ်နော်…။
P.S. နောက်.. ဂျောက်ချရမယ့်သူ စဉ်းစားဆဲ…နော်…. အာရုံရရင် ဂျောက်ချမယ်…။ ဟော စဉ်းစားမိပါပြီ.. မီ… ပါ.. ရွှန်းမီ… ပါ… စုံစီနဖာ စာမျက်နှာက ရွှန်းမီ ကို ဂျောက်ချပါတယ်…။
Filed under: Tag |	22 Comments »
Posted on October 3, 2008 by layma
ကျွန်မ လွတ်လပ်သွားပြီ …
ကျွန်မ လွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီ …
သူ.. ကျွန်မကို စွန့် လွှတ်လိုက်ပြီ…
မဟုတ်ဘူး… ကျွန်မက သူ့ ကို စွန့်ခွာခဲ့တာ …
ဒီလိုနေ့ မျိုးကို ကျွန်မ စောင့်နေခဲ့တာ သိပ်ကြာပြီ … ကျွန်မကို သိပ်ထိန်းချုပ်လွန်းတဲ့ သူ့ ဆီမှာ ကျွန်မ မွန်းကြပ်နေခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီ… ။ သူ့ စိတ်နဲ့ကျွန်မကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ရတာ ကြာခဲ့ပြီ …။ လက်တွဲစကတော့ ဒီလိုညနေခင်းတွေမှာ သူနဲ့ အတူ ရှိနေရတာ… သူ ပျော်အောင် …သူခိုင်းသမျှ.. လုပ်ပေးနေရတာ ကျွန်မ သိပ်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ် …။
ဒါပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်မ ကိုယ်ကျွန်မ ပျောက်ဆုံးလာခဲ့တယ်…။ ကျွန်မ ကိုယ် ကျွန်မ ( ကျွန်မစိတ်.. ခံစားချက်… ဆန္ဒ … ပျော်ရွှင်မှု ) ရှာမတွေ့ တော့မှာ ကျွန်မ သိပ်ကြောက်လာတယ် … ။ ကျွန်မ အရင်က သိပ်ထက်မြက်တယ်လေ… ကျွန်မ က လှတယ် … တော်တယ်… လွတ်လပ်စွာ သွားလာနေထိုင်တတ်တယ်… အခု .. သူ့ လက်ထဲရောက်မှ … သူ့ ဆန္ဒနဲ့ရှင်သန်နေရတယ်…။ သူမသွားနဲ့ ဆိုရင် ကျွန်မ မသွားရဘူး… ပြန်ခဲ့တော့ဆိုရင် ကျွန်မ ပြန်ရတယ် … အခုသွားဆိုရင်လည်းသွားရတယ်… သွားရင်းလာရင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံမိ… စကားလက်ဆုံကျမိရင်လည်း … သူက ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲခေါ်ပြန်တယ် …။
ဒီနေ့ တော့ ကျွန်မရဲ့ ထိန်းချုပ်ခံရမှုတွေ အားလုံး အဆုံးသတ်သွားပါပြီ …။ လမ်းသရဲပုံစံ … ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကောင်လေး တစ်ယောက်က သူနဲ့ ကျွန်မကြားက သံယောဇဉ်ကြိုးကို တိခနဲ ပြတ်သွားအောင် ဆွဲဖြတ်လိုက်တယ်…။
ကျွန်မ ပျော်လိုက်တာ …။ သူ့ ရဲ့ နှမြောတသစွာ ကျွန်မကို ငေးကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေအောက်မှာ ကျွန်မစိတ်တွေ ယိုင်လဲမသွားခင် ကျွန်မ အမြန်ဆုံးပြေးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်…။
အခုတော့လွတ်လပ်ပေါ့ပါးလိုက်တာလေ … သူခွင့်မပြုခဲ့တဲ့ နေရာတွေ ကို ကျွန်မသွားတယ် …။ လမ်းတစ်လျှောက် တွေ့ သမျှ အရာ အားလုံးနဲ့ ကျွန်မ မိတ်ဆွေဖွဲ့ တယ်…။ စကားပြောတယ်…။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ပြန်ရှာတွေ့ လိုက်ရတယ်…။ ကျွန်မ သိပ်ပျော်တယ်…။ ကျွန်မသွားချင်ရာ သွားတယ်… ပြောချင်ရာပြောတယ် … ပျော်ချင်သလိုပျော်တယ်….။ ငါ့ကိုယ်ငါ ပိုင်ဆိုင်ပြီဟေ့ လို့အသံတိတ် ဟစ်ကြွေးနေမိတယ် … ။
မှောင်ရီပျိူးလာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့အပျော်တွေဟာ အလင်းနဲ့ အတူ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်စပြုလာတယ်…။ အမှောင်ဝင်လာရင်… ကျွန်မ ဘယ်ကို ပြန်ရမှာပါလိမ့် … အရင်ကတော့ ဒီအချိန်ဆို သူ့ ရင်ခွင်မှာ မှီပြီး ကျွန်မ အိမ်ပြန်နေကျ..။ အခုတော့ ကျွန်မမှာ နားခိုရာ မရှိတော့ဘူး…။ အေးစက်စက် အမှောင်ထုအောက်မှာ ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲ ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ …။
မနက်ဖြန်ရော … ကျွန်မ ဘယ်တွေသွားပြီး… ဘာတွေလုပ်ရမှာပါလိမ့် … သူ့ ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကျင့်သားရနေခဲ့တဲ့ကျွန်မအတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ အတော်ခက်ခဲတဲ့ အရာပါလား…။ ကျွန်မ မျက်ရည်ကျလာခဲ့တယ်… တကယ်ဆို ကျွန်မ ပျော်နေရမှာမဟုတ်လား … ။ ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ကျွန်မ အသက်ရှူကြပ်လာတယ်…။ ကျွန်မဟာ တစ်ယောက်ထဲ မနေတတ်တော့ပါလား…။ သူမပါဘဲ ခရီးမဆက်နိုင်တော့ပါလား…။
ကျွန်မ ဘ၀ဟာ အခုမှ တကယ်ကို သေဆုံးသွားပါပြီ …။ မနက်ဖြန်ကို ကျွန်မ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ…။
ကျွန်မတို့ အတူရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီ မြက်ခင်းပေါ်မှာ ကျွန်မ ငြိမ်သက်စွာ လဲလျောင်းရင်း အသစ်တစ်ယောက်နဲ့ပျော်နေမယ့်သူ့ ကို ငေးမော ကြည့်နေရမလား…. ကောင်းကင်မှာ ပျံဝဲနေတဲ့ ရောင်စုံစွန်လေးတွေ နဲ့သက်ဆိုင်သူကိုယ်စီကို ကြည့်ရင်း မနာလို ဖြစ်နေရမလား…။ သူနဲ့ အတူ ရှိနေတုန်းက ကောင်းကင်မှာ လှလှပပလေး မော်ကြွားနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မက အခုတော့ အသုံးမ၀င်တော့တဲ့ စက္ကူစုတ် တစ်ရွက် ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလား…။
တစ်ယောက်ယောက်က ကောက်ယူသွားရင်တော့ ငါ ကောင်းကင်ပေါ် ပျံဝဲနိုင်မှာပါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးမိပြန်တယ်…။ ကောက်ယူတဲ့ သူဟာ သူသာဖြစ်ခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးလေးနဲ့မနက်ဖြန်အတွက် ကျွန်မ အသက်ရှူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် ….။ ။
မှတ်ချက်။ ။ စွန် ရာသီရောက်ပြီဖြစ်လို့ကောင်းကင်မှာ စွန်တွေ ပျံဝဲနေကြတယ်…။ ကြိုးဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ စွန်လေး တစ်ခုနေရာက စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ထားပါတယ်…။ တဆက်တည်းမှာပဲ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေကို စွန်ကြိုးကစားသလို အလျှော့အတင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဖတ်ဖူးမှန်းမသိတာလေး သတိရလို့စွန်လေးကို မိန်းမတစ်ယောက်ပုံစံရေးမိပါတယ် … ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းပြောချင်တာကတော့ စိတ်ဆိုတာ လွတ်လပ်တိုင်းမကောင်းပါ… အသိတရားဆိုတဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုလေးနဲ့ဒွန်တွဲနေသင့်ပါတယ် … ဆိုတဲ့ အတွေးလေးပါ…။ လေးမအတွက်တော့ အတော်လေး ခက်ခဲနေသေးတဲ့ အရာပါပဲ …။ ထိန်းချုပ်ဖို့ နေနေသာသာ မြန်လွန်းတဲ့ စိတ်နောက်ကို အသိ..နဲ့သတိက လိုက်လို့မမီနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်…။
Filed under: Pieces, Seasonal Post |	23 Comments »
Posted on October 1, 2008 by layma
သီချင်းဆိုပြီး ပြန်လာပုံကိုကြည့်ပါ…။ နေကောင်းကျန်းမာသွားပါပြီ… ရှင်…။ အဖွဲ့ သားများအားလုံး မုန့်လာကျွေးချင်ရင် ကျွေးလို့ရပါပြီ…။
ဟို.. ညစ်နေတဲ့ မဲဆောက်ကြွက်… စိတ်ညစ်ရင်.. ၀မ်းနည်းရင် သီချင်းဆိုပြီး ကပြပါ…။
ဘိုနှစ်ဘို.. ဘိုညိမ်း နဲ့ ဘိုတင့်… ပြုစုမယ့်သူရှိတော့ ဒဏ်ရာကိုမပျောက်အောင် လုပ်နေတာလားအစ်မ ၊ အိမ်အလုပ်တွေ မလုပ်ရတော့ဘူး..တို့.. ဟွန်း… အထင်နဲ့ မှန်းအုပ်နေတယ်…။ ဟင်းလေးဘာလေး ချက်ပို့ဖို့တော့မစဉ်းစားကြဘူး..။ ကေ နဲ့ ရာဟုကို ချက်ကျွေးဖို့ ဟင်းချက်ကျင့်နေတာ မသိဘူးမှတ်နေလား.. ဖွလိုက်ရမလား…။
မီ.. မွန်.. စိုးမိုးလေး.. ကြေးအိုးလေး… မမကို သတိရတယ်ဆိုပြီး ဇီးထုပ်တွေ လှိမ့်စားနေကြသလား…။
မှော်ဆရာ.. အညာသား.. ကျန်စစ်… လွမ်းလုင် … သီဟညိမ်း… မောင်မင်းတို့စာမေးပွဲ ချိကြဘူးလား..။ နက်ကောင်းနေကြတယ်ပေါ့… ။ ဟိ… ခင်လို့ .. စတာ…။
ဟန်လင်း.. မီးလေး.. ခေါင်ခေါင်..ထိုက်မင်း… လာလည်သွားကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..။
မလင်းလက်.. ကိုသင့်… မင်္ဂလာပါရှင်..။
87 … ကိုယ့်ဆရာတဲ့.. ခေါ်ပုံကိုက …. ဆိုက်ကားဆရာကို စကားပြောတဲ့ လေသံနဲ့ တူလိုက်တာ…။
….ဒွတ်ခပါပဲ.. လက်ခိုက်မိတာ.. ခေါင်းကြောင်သွားပြီထင်တယ်… စီဘောက်နဲ့ပို့စ်ရေးရမယ့်နေရာ မှားရေးမိသွားပြီ…။ SORRY !
သို့… သူငယ်ချင်း ( ၃ )
Posted on September 11, 2008 by layma
ဟေ့ … သူငယ်ချင်း …
နင့်အပြုံးတွေ စွန်းထင်းလို့ 
မှတ်မိနေသေးလား … ။
နင်သိလား … ။
တစ်ချပ်လောက်ပါ … ။ ။